8 Na ɔman no nyinaa boaboaa wɔn ano sɛ nipa biako+ wɔ abɔnten+ baabi a ɛwɔ Nsu Pon+ no anim. Ɛnna wɔka kyerɛɛ ɔkyerɛwfo* Esra+ sɛ ɔmfa nhoma+ a Mose mmara+ a Yehowa de maa Israel wom no mmra.+ 2 Ɛnna ɔsɔfo+ Esra de mmara no baa bagua+ no anim, baabi a mmarima ne mmea ne obiara a otumi tie+ asɛm te ase ahyia no, ɔsram a ɛto so ason+ no da a edi kan. 3 Na ɔkenkan+ no den wɔ abɔnten baabi a ɛwɔ Nsu Pon no anim, fi ahemadakye kosii owigyinae,+ wɔ mmarima ne mmea ne nnipa foforo a wotumi te nneɛma ase no anim; na ɔman no nyinaa yɛɛ asõ+ tiee+ mmara nhoma no mu nsɛm. 4 Na ɔkyerɛwfo Esra gyinaa dua apa+ a wɔayɛ ama nhyiam no so; wɔn a na wogyinagyina ne nifa so ne Matitia ne Sema ne Anaia ne Uria ne Hilkia ne Maaseia, na wɔn a na wogyinagyina ne benkum so ne Pedaia ne Misael ne Malkiya+ ne Hasum+ ne Has-Badana ne Sakaria ne Mesulam. 5 Na bere a Esra buee+ nhoma no mu no, ɔman no nyinaa hui, efisɛ na ɔwɔ soro sen wɔn nyinaa; na obuee mu no, nnipa no nyinaa sɔresɔree.+ 6 Ɛnna Esra hyiraa Yehowa,+ nokware Nyankopɔn, Nea ɔyɛ kɛse no. Na ɔman no nyinaa momaa wɔn nsa+ so gyee so sɛ, “Amen! Amen!”+ Afei wɔkotow+ de wɔn anim butubutuw fam+ sɔree Yehowa. 7 Na Yesua ne Bani ne Serebia,+ Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaria, Yosabad,+ Hanan, Pelaia,+ Lewifo no, kyerɛkyerɛɛ mmara no mu kyerɛɛ ɔman no,+ bere a na nnipa no gyinagyina hɔ.+ 8 Na wɔtoaa so kenkan+ nokware Nyankopɔn mmara nhoma no den, na wɔkyerɛkyerɛɛ mu ma emu daa hɔ yiye, na wɔboa ma wonyaa akenkan no mu ntease.+ 9 Na Nehemia+ a ɔyɛ amrado*+ no, ne ɔsɔfo Esra,+ ɔkyerɛwfo no, ne Lewifo a na wɔrekyerɛkyerɛ ɔman no ka kyerɛɛ wɔn nyinaa sɛ: “Ɛnnɛ da yi yɛ da kronkron ma Yehowa mo Nyankopɔn.+ Munnni awerɛhow, na munnsu.”+ Saa bere no, na ɔman no nyinaa resu bere a wɔretie mmara no mu nsɛm no.+ 10 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ nkodi sradeduan na monnom adɔkɔdɔkɔde, na momfa ebi+ nkɔma wɔn a wonsiesiee hwee mmaa wɔn, efisɛ ɛnnɛ da yi yɛ da kronkron ma yɛn Awurade, enti mommma mo werɛ nnhow, na Yehowa mu anigye ne mo abannennen.” 11 Na Lewifo no ka kyerɛɛ nkurɔfo no nyinaa sɛ: “Monyɛ komm! Efisɛ ɛnnɛ da yi yɛ da kronkron, enti mommma mo werɛ nnhow.” 12 Enti nkurɔfo no nyinaa kodidii na wɔnomee, na wɔkyekyɛɛ bi+ maa afoforo, na wodii ahurusi+ kɛse efisɛ wɔtee nsɛm a wɔka kyerɛɛ wɔn no ase.+ 13 Na da a ɛto so abien no, ɔman no nyinaa mu agyanom atitiriw ne asɔfo ne Lewifo no boaboaa wɔn ho ano baa ɔkyerɛwfo Esra nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya mmara nsɛm no mu ntease.+ 14 Ɛnna wohui sɛ wɔakyerɛw wɔ mmara no mu sɛ Yehowa nam Mose+ so hyɛe sɛ, sɛ Israel mma redi ɔsram a ɛto so ason+ no mu afahyɛ no a, wɔntenatena asese mu,+ 15 ma enti ɛsɛ sɛ wɔbɔ dawuru+ na wɔpae mu ka wɔ wɔn nkurow nyinaa mu ne Yerusalem+ sɛ: “Monkɔ mmepɔw+ no so nkɔpɛ ngodua+ mmãã ne nku dua mmãã ne ohuadua mmãã ne berɛw ne nnua kusuu so mmãã mfa mmɛbɔ asese sɛnea wɔakyerɛw no.” 16 Ɛnna ɔman no fii adi kɔpɛɛ bi bae, na wɔde bobɔɔ asese, obiara de wɔ ne dan atifi+ ne wɔn adiwo+ ne nokware Nyankopɔn fie adiwo ne mmɔnten+ so wɔ baabi a ɛbemmɛn Nsu Pon+ no ne Efraim Pon no.+ 17 Enti wɔn a wofi nkoasom mu bae no bagua no nyinaa bobɔɔ asese, na wɔtenatenaa asese no mu; efi Nun ba Yosua+ nna no mu besi saa da no, na Israel mma nyɛɛ saa da, enti wodii ahurusi kɛse.+ 18 Na efi da a edi kan kosi da a etwa to no, wɔkenkan nokware Nyankopɔn mmara nhoma no den da biara;+ wodii afahyɛ no nnanson, na da a ɛto so awotwe no, wɔyɛɛ afahyɛ nhyiam titiriw sɛnea mmara no kyerɛ.+
^ Hebri asɛmfua no kyerɛ obi a ɔhwɛɛ Mmara no ne Kyerɛw Kronkron no afã foforo so kyerɛwee bi.
^ Hwɛ Esr 2:63 ase hɔ asɛm, “Tirsata.”